Semalt विश्लेषण उपकरणहरू
Semalt सफलता का कथाहरू
Semalt को साथ सम्पर्कमा रहनुहोस्
गुगलमा उच्च श्रेणीकरण गर्न चाहानुहुन्छ? Semalt.net तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम समाधान हो। यससँग सब भन्दा शक्तिशाली उपकरणहरू छन् तपाईलाई गुगलमा उच्च स्तर निर्धारण दिन। साइट प्रयोगकर्ता मैत्री र अत्यधिक सहज छ। एउटा दृश्यमा, तपाईसँग आफु औंलाको छेउमा सफल हुन आवश्यक सबै चीज छ।
Semalt विश्लेषण उपकरणहरू वेबसाइटमा सजीलो पहुँच योग्य छन्। तपाईंले उनीहरूले प्रस्ताव गरेको उत्पादनहरू देख्नुहुनेछ, अधिक कम्पनीहरूको बारेमा, उनीहरूको सफलताका कथाहरू र उनीहरूसँग सम्पर्क गर्नको लागि विभिन्न विकल्पहरू। तपाईंसँग Semalt.net का साथ लग ईन गर्न वा खाता सिर्जना गर्न विकल्प छ। खाता सिर्जनाले तपाईंलाई Semalt मा तपाईंको SEO प्रोजेक्टहरू बचत गर्न मद्दत गर्दछ।
SEALAL विश्लेषण विश्लेषण
वेब एनालिटिक्सले स collecting्कलन, रिपोर्ट गर्ने र वेब डेटाको विश्लेषण समावेश गर्दछ। यो एक जटिल प्रक्रिया हो जुन वेबसाइटले यसको इच्छित लक्ष्यहरू र उद्देश्यहरू प्राप्त गरिरहेको छ भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ। विश्लेषण गरिएको डाटाबाट, वेबसाइटको सुधारको लागि राम्रो रणनीतिहरू त्यसपछि सिर्जना गरिन्छ। Semalt विश्लेषण उपकरण सबैभन्दा शक्तिशाली उपकरण हो तपाईलाई यी र अधिक गर्न मद्दत गर्न।
Semalt विश्लेषण उपकरणहरू sections खण्डमा विभाजन गरिएको छ।
यो सेक्सनमा तपाईले आफ्नो वेबसाइटको विस्तृत विश्लेषणका लागि आवश्यक उपकरणहरू भेट्टाउनुहुनेछ। SERP खण्डका तीन उप-सेक्सनहरू छन्।
a TOP मा कुञ्जी शब्दहरू : यहाँ तपाईं अघिल्लो मितिको विपरित गुगल TOP 1-100 जैविक खोज परिणामहरूमा तपाईंको वेबसाइटको लागि खोजिएको कुञ्जी शब्दहरूको संख्या देख्नुहुनेछ। तपाईले चार्ट हेर्न पनि पाउनुहुनेछ जुन Google TOP मा कुञ्जी शब्दहरूको संख्या समयसँगै देखाउँदछ। यस उपकरणको साथ तपाईले खोजशब्दहरूको संख्या परिवर्तनहरू जाँच गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको वेबसाइटले TOP मा लिन्छ। अन्तमा, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को क्रमबद्ध पृष्ठहरु र एक विशेष खोजशब्द को लागी उनीहरुका SERP स्थानहरु हेर्न सक्नुहुन्छ।
b उत्तम पृष्ठहरू: यहाँ, तपाईंलाई तपाईंको सब भन्दा राम्रो ट्राफिक-उत्पादन पृष्ठहरूमा अन्तरदृष्टि दिइनेछ। तपाईले एउटा चार्ट पाउनुहुनेछ जुन वेबसाइटमा पृष्ठको नम्बरमा परिवर्तन देखाउँदछ जुन तपाईंको प्रोजेक्टको स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म छ। तपाईले गुगल टेक १-११ जैविक खोजी परिणाममा वेबसाईट पृष्ठहरूको संख्या पनि जान्न सक्नुहुनेछ, अघिल्लो मितिको विपरित। तपाई यसलाई पट्टी चार्टको रूपमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ नियमित संख्यात्मक सारांशको विपरीत। त्यहाँ अर्को चार्ट छ जुन तपाईका कुञ्जी शब्दहरूको संख्यामा परिवर्तनहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ जुन तपाइँका चयनित पृष्ठहरू तपाइँको पृष्ठहरूको प्रक्षेपण मिति देखि TOP मा रैंकिंग गरिएको छ।
c प्रतिस्पर्धा: Semalt ले तपाईंलाई तपाईंको प्रतिस्पर्धीहरूका वेबसाइटहरूमा अन्तर्दृष्टि दिन्छ ताकि तपाईं तिनीहरूबाट सिक्न सक्नुहुन्छ र सोही अनुसार तपाईंको हालको व्यवसाय योजना समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाइँलाई सबै वेबसाइटहरू फेला पार्न मद्दत गर्दछ जुन Google TOP 1-100 मा कुञ्जी शब्दहरूको लागि जुन तपाइँको वेबसाइटको लागि समान छ। तपाइँको वेबसाइटले तपाइँको प्रतिस्पर्धीहरू बीच कस्तो स्थिति राख्छ भनेर पनि तपाइँलाई देखाइनेछ। तपाइँलाई साझा कीवर्डहरूको कुल संख्यामा अन्तर्दृष्टि दिइनेछ जसका लागि तपाइँका चयन गरिएका प्रतिस्पर्धीहरूले TOP मा स्थान निर्धारण गरेका छन्। तपाइँले एक तालिका पनि फेला पार्नुहुनेछ जहाँ तपाइँले साझेदारी गरिएको कुञ्जी शव्दहरू देख्न सक्नुहुनेछ जुन तपाइँको वेबसाइट र तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई Google टपमा राख्दछन्। यस तालिकाबाट, साझा कुञ्जी शव्दहरूको संख्यामा भिन्नता ट्र्याक गर्न अघिल्लो मितिको विपरित सजिलो हुन्छ।
तपाईको लागि यो पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण छ कि गुगलले तपाईंको वेबपृष्ठलाई अद्वितीय मान्दछ कि गर्दैन। अरू कसैले तपाईंको वेबपृष्ठ सामग्री प्रतिलिपि गरेको हुन सक्छ र यदि तपाईंको छिटो तपाईंको भन्दा छिटो सूचकांकित गरिएको छ भने, गुगल तपाईंको वेबपृष्ठ ट्याग गर्नेछ र सामग्रीको प्राथमिक स्रोत लेबल गर्नेछ। तपाईं यसलाई निगरानी गर्न चाहानुहुन्छ किनकि गुगलले साइटहरूलाई दण्ड दिन्छ जुनसँग डुप्लिकेट सामग्रीको ठूलो संख्या छ। यहाँ तपाईले फेला पार्नुहुनेछ कि गुगलले तपाईको वेबपेजलाई अद्वितीय स्रोत जस्तो व्यवहार गर्दछ वा गर्दैन। Semalt.net तपाइँ तपाइँको वेबसाइट अनौंठो मानिएको छ कि छैन भनेर तपाइँलाई मद्दत गर्न तपाइँको विशिष्टता प्रतिशत रेटिंग हेर्न सक्षम गर्दछ। ०-50०% को स्कोर भनेको तपाइँले नचाहानु भएको कुरा हो - यसको मतलब Google ले तपाइँको वेबपृष्ठलाई नक्कल मान्दछ। %१% -80०% को रेटिंगको मतलब गुगलले सोच्दछ कि तपाईंको वेबपेज उत्तममा पुनःलेखन हो। यो एक औसत स्कोर हो तर Semalt ले तपाईंलाई राम्रो गर्न मद्दत गर्दछ। %१% -१०% को स्कोर एक अनुकूल सूचक हो कि तपाईले चीजहरू यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। गुगलले तपाईंको सामग्रीलाई अद्वितीय मान्दछ। यसले तपाईको रैंकिंगलाई ठूलो सुधार गर्दछ।
तपाईंले एक "सामग्री" उपकरण फेला पार्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई गुगलले तपाईंको वेबपृष्ठमा हेर्ने सबै सामग्रीहरू हेर्न मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको वेब पृष्ठको सामग्रीको नक्कल भागहरू पनि हाइलाइट गर्दछ।
अर्को उपकरण जुन तपाइँ उपयोगी पाउनुहुनेछ "मूल सामग्री स्रोत" उपकरण हो जुन Google ले तपाइँको वेबपृष्ठको सामग्रीको लागि प्राथमिक स्रोतहरू लिने सबै साइटहरू ल्याउँदछ। यसले तपाईंलाई तपाईंको सामग्रीको सहि भाग देखाउँदछ जुन ती अन्य वेबसाइटहरूमा फेला पर्दछ ताकि तपाईं ती भिन्नताहरूमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ तपाईंको विशिष्टता रेटिंगलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि। Semalt सँग पेशेवर लेखकहरूको टोली छ जसले तपाईंलाई तपाईंको वेबपृष्ठ सामग्री सकेसम्म अद्वितीय बनाउन मद्दत गर्दछ। तिनीहरू Semalt.net मा सजिलैसँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ।
तपाईको गुगल खातामा लगईन गरेपछि तपाईसँग गुगल वेबमास्टर उपकरणको पहुँच हुनेछ। यस सेक्सनमा, तपाई कसरी देख्नुहुनेछ कि कसरी तपाईंको वेबसाइट गुगलमा खोजी परिणामहरूमा देखिन्छ। यसले तपाईंलाई अनुक्रमणिका मुद्दाहरूको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं पूर्ण वेबसाइटको रूपमा तपाईंको वेबसाइटहरू र साइटम्यापहरू सबमिट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र Google द्वारा तिनीहरूको अनुक्रमणिका अनुरोध गर्नुहोस्।
तपाईंसँग मेट्रिक्समा पनि पहुँच हुनेछ जुन तपाईंको वेबसाइटको प्रभावकारितालाई सुझाव दिन्छ। यसले तपाइँलाई के सही गरिरहनु भएको छ र ती चीजहरू गलत गर्दैमा पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाइँको साइटलाई Google TOP 1-100 मा दर्जा दिन रोक्दछ।
साइटम्याप उपकरणले गुगललाई तपाईंको वेबसाइटको साइटम्याप सबमिट गर्न अनुमति दिन्छ ताकि तपाईं कुन साइटम्यापलाई अनुक्रमित गरिएको छ र ती त्रुटिहरूमा त्रुटिहरू जान्न सक्नुहुन्छ।
पृष्ठ गति विश्लेषक एक शक्तिशाली उपकरण हो जुन तपाईंको पृष्ठ लोड समय, तपाईंसँग सफल अडिटहरूको संख्या र फिक्स गर्न त्रुटिहरूको संख्या प्रदर्शन गर्दछ। यस उपकरणले तपाइँलाई दुबै डेस्कटप र तपाइँको वेबपृष्ठको मोबाइल संस्करणहरूको लागि प्रतिशत स्कोर दिन्छ। तपाइँको वेबसाइट को लोडिंग गति तपाइँको रैंकिंग को लागी असर गर्छ, त्यसैले यो उपकरण अमूल्य छ।
०--4 of को स्कोरले अत्यन्त ढिलो गतिलाई जनाउँछ। -०-8989 को स्कोरले औसत गति ब्वाँसो दर्साउँछ उच्च स्कोर high ०-११००ले राम्रो गतिलाई दर्साउँछ।
Semalt ले तपाइँको वेबसाइट-मा एक डेस्कटप ब्राउजर र एक मोबाइल ब्राउजरमा लोडिंग प्रक्रिया अनुकरण गरेर कसरी उपयोगकर्ता मैत्री तपाइँको अन्तर्दृष्टि दिन्छ। यसले तपाइँलाई देखाउन मद्दत गर्दछ कि हामी कसरी तपाइँको वेबपृष्ठलाई Google SERP प्रमोशनको लागि अनुकूलित गर्ने छौं।
जब तपाईं आफ्नो खातामा लग इन गर्नुहुन्छ, तपाईंलाई तपाईंको ड्यासबोर्डमा लगियो जहाँ तपाईं आवश्यक फिल्टरहरू प्रयोग गर्न विकल्पहरू फेला पार्नुहुनेछ र हालका डाटा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं स्लाइसहरू थपेर आफ्ना प्रोजेक्टहरूलाई समूहबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग विभिन्न विकल्पहरू पनि छन् जुन तपाईंको वेबसाइटहरूको प्रगति निगरानी गर्न प्रोजेक्टहरू क्रमबद्ध गर्न विकल्प छ।
Semalt तपाइँको SEO अनुकूलन को लागी सबै भन्दा राम्रो उत्पादनहरु प्रदान गर्दछ। सूचीबद्ध उत्पादनहरूमा समावेश:
AutoSEO: यसले तपाईंलाई राम्रो वेबसाइट अप्टिमाइजेसन दिन मद्दत गर्दछ, तपाईंको वेबसाइटको दृश्यता सुधार गर्दछ, नयाँ आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ र तपाईंको व्यवसायको अनलाइन उपस्थिति बढाउँदछ। AutoSEO सेवाहरू Semalt प्रदान गर्दछ कुनै पछाडि दोस्रो छैन।
पूर्ण एसईओ: पूर्ण एसईओको साथ, Semalt ले तपाईंलाई राम्रो वेबसाइट अप्टिमाइजेसन दिन्छ, एक सकारात्मक आरओआई, तपाईंलाई तपाईंको भविष्यमा बुद्धिमानीपूर्वक लगानी गर्न मद्दत गर्दछ र छिटो, प्रभावकारी र दीर्घकालीन परिणाम दिन्छ। Semalt को साथ तपाईको आफ्नो पूर्ण SEO अभियान सुरू गर्नुहुँदा तपाई Google TOP १०० वेबसाइटहरु बीचमा क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ।
E- वाणिज्य SEO: तपाइँ Semalt को E-वाणिज्य SEO भन्दा तपाइँको E-वाणिज्य वेबसाइट को लागी राम्रो SEO अभियान पाउन सक्नुहुन्न। Semalt ले तपाईंको लागि काम गर्दछ - तिनीहरूले वास्तवमा ग्राहकहरू ल्याउँदछन्! तिनीहरूले तपाईंको कम फ्रिक्वेन्सी कुञ्जी शव्दहरू प्रचार गर्नका लागि दर्शकहरूको दृश्यता बढाउन मद्दत गर्दछन्, तिनीहरूले तपाईंलाई एउटा विशेष विश्लेषण दिन्छन् र तपाईं परिणामहरूको लागि मात्र भुक्तान गर्नुहुन्छ।
विश्लेषण: Semalt को वेबसाइट विश्लेषणात्मक उपकरणहरूले तपाइँलाई तपाइँको बजार अनुगमन गर्न, तपाइँको सम्बन्धमा तपाइँको प्रतिस्पर्धीको स्थिति ट्र्याक गर्न मद्दत गर्दछ र उनीहरू एक topnotch व्यापक विश्लेषण विश्लेषण जानकारी प्रदान गर्दछ। तपाईंले नयाँ बजारहरू पनि पत्ता लगाउनुहुनेछ। तीनिहरूले तपाईलाई मद्दत गर्दछ तपाईको डेटालाई PDF र EXCEL ढाँचामा रूपान्तरण गर्न - त्यस्ता जीवन बचतकर्ताहरू!
SSL: Semalt तपाइँको वेबसाइट को लागी सुरक्षा प्रदान गर्दछ। यसले तपाईंको प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुरक्षा पनि सुनिश्चित गर्दछ। तपाईंसँग गुगल र गुगल क्रोमका बढि आगन्तुकहरू छन् तपाईंलाई हरियो रेखा दिन्छ।
Semalt.net मा उपकरण र उत्पादनहरू समीक्षा गरेपछि, हामी Semalt एक गहिरा स्तरमा भेट्ने छौं ।
यहाँ तपाईं विशेषज्ञहरूको उनीहरूको कुशल टीम हेर्न सक्नुहुनेछ र तिनीहरूको कार्यक्षेत्रको दृश्य पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
Semalt का उत्पादनहरु काफी लागत मैत्री छ किनकि तिनीहरु साँच्चिकै तपाईको व्यवसाय लाई सफल बनाउन चाहान्छन्। त्यहाँ यदि तपाईं तिनीहरूको सेवाहरू मासिक, प्रत्येक months महिना, months महिना वा वार्षिक प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईंको लागि योजना छ।
Semalt का खुशी ग्राहकहरु उत्सुकताका साथ उच्च रूपान्तरण दरहरु को समीक्षा छोड्दैछन् जब उनीहरुले Semalt को सुरक्षित हातहरु मा आफ्नो व्यवसाय को सौंदा छ।
Semalt ब्लग सबैको लागि उपलब्ध छ जसले एसईओको बारेमा आधारभूत चीजहरूबाट पछिल्लो उद्योग समाचारहरूमा मूल्यवान जानकारी चाहिन्छ।
Semalt को मद्दत केन्द्र मा, यदि तपाई अडिनुभयो भने तपाईले सहायता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
केहि थप पैसा बनाउन चाहानुहुन्छ? Semalt तपाईंले तिनीहरूको पुनर्विक्रेता कार्यक्रमको साथ कभर गर्नुभयो जब तपाईं तिनीहरूको टॉपनच एसईओ सेवाहरू पुन: बेच्नुहुन्छ।
SEMALT सफलता स्टोरीहरु
तपाइँ 5000००० भन्दा बढी वेबसाइटहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ जुन Semalt मा अधिक सफल धन्यवाद भएका छन्। के तपाइँ सोच्नुहुन्न कि तपाइँको वेबसाइट त्यो सूचीमा पनी समय छ?
SEMALT का साथ छुनुहोस्
Semalt सामाजिक हो। तपाईं तिनीहरूलाई सामाजिक मिडियामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ, ईमेल र तिनीहरूको हटलाइनहरू पनि उपलब्ध छन्। तपाईं तिनीहरूको शारीरिक ठेगानाबाट पनि ड्रप गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं छिमेकीमा हुनुहुन्छ भने।
कसैले यो तथ्यलाई इन्कार गर्न सक्दैन कि Semalt उनीहरूको ग्राहकहरूको सफलताको लागि समर्पित छ उनीहरूले प्रदान गरेका शक्तिशाली उपकरणहरूको एरेबाट। Semalt निश्चित रूप मा SEO सम्बद्ध सबै चीजहरूको लागि समाधान केन्द्र हो। तपाईंको व्यवसाय पक्कै पनि सुरक्षित हातहरूमा छ।